साँप खेल 🥇 प्रविष्ट गर्नुहोस् र Emulator.online बाट मजा लिनुहोस्
साँप खेल: कसरी चरण-दर-चरण खेल्ने? 🙂
खेल्नु ब्याकगामोन नि: शुल्क को लागी, अनलाइन यी चरण-देखि-चरण निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस्:
चरण 1 । तपाइँको मनपर्ने ब्राउजर खोल्नुहोस् र खेल वेबसाइटमा जानुहोस् Emulator.online
चरण2। वेबसाइटमा प्रवेश गर्ने बित्तिकै, खेल पहिले नै स्क्रिनमा प्रदर्शन हुनेछ। तपाईले क्लिक गर्नु पर्छ प्ले र तपाईं कन्फिगरेसन छनौट गर्न सुरू गर्न सक्नुहुन्छ जुन तपाईंलाई सबैभन्दा धेरै मनपर्दछ। तपाईं क्लासिक मोड र अवरोध मोड (साहसिक) बीच छनौट गर्न सक्षम हुनुहुनेछ। . ????
चरण Here. यहाँ छ केहि उपयोगी बटनहरू छन्। तिमी सक्छौ " आवाज थप्नुहोस् वा हटाउनुहोस् ", थिच्नुहोस्" प्ले "बटन र खेल सुरु गर्नुहोस्, तपाईं सक्नुहुन्छ" रोक्नुहोस् "र" फेरि शुरु गर्नु "कुनै पनि समयमा।
4 कदम। खेल जित्नको लागि तपाईले रbles्गको बलहरु को क्रम नष्ट गर्नुपर्दछ बुलबुलेहरु हालेर। जब तपाईं तीन वा अधिक समान रंगको सँगै राख्नुहुन्छ, तिनीहरू हटाइन्छन्।
साँप खेल के हो? 🐍
यो साँप खेल मोबाइल फोन, भिडियो कन्सोल र कम्प्युटरहरूको लागि खेल हो, जसमा मुख्य उद्देश्य पर्दा भर सर्पको टाउको मार्गदर्शन छ , यसको मार्गमा अनियमित रूपमा वितरित स्याउहरू खाने कोशिस गर्दै। हराउन नदिनको लागि, तपाईंले भित्ताहरू र सर्पको पुच्छरमा हिर्काउनु हुँदैन।
यसको सरलताले यसलाई धेरै विशेष खेल बनाउँदछ। तपाईलाई आफ्नो कुञ्जीपाटीमा बाँणहरू मात्र प्रयोग गर्नुपर्दछ साँपलाई विजयको लागि मार्गदर्शन गर्न।
खेलको इतिहास 🤓
सर्प अक्टोबर १ 1976 XNUMX मा नाकाबन्दीको रूपमा जन्म भएको थियो . मूल खेलमा तपाईं अन्य प्रतिद्वन्द्वीहरूसँग व्यवहार गर्दै हुनुहुन्थ्यो।
लक्ष्य तपाईंको शत्रुहरू तपाईं वा उनीहरूसँग टकरानेको लागि थियो जब तपाईं अझै उभिरहनु भएको थियो। तपाईं प्रत्येक आन्दोलनमा 90 ० डिग्री मात्र सार्न सक्नुहुनेछ र यसको लागि तपाईंसँग क्लासिक दिशात्मक बटनहरू थिए।
साँप खेल को सबै भन्दा प्रसिद्ध संस्करण मा, ध्यानमा लिनको संस्करण र जुन हाम्रो दुश्मन हो आफैलाई हो, किनकि हामी हामी को कुनै पनि भाग संग टकराने सक्छ यदि हामी होशियार भएनौं भने।
नाकाबन्दी र सर्पको संस्करण धेरै थिए। अटारीले अटारी २2600०० को लागी दुई संस्करणहरू सिर्जना गर्‍यो, डोमिनोस र सराउन्ड । यसको अंशको लागि, संस्करण भनिन्छ कुर्म को लागि प्रोग्राम गरिएको थियो कमोडोर र एप्पल द्वितीय कम्प्युटरहरू .
र 1982 मा एक शीर्षक शीर्षक निब्बलर जारी गरियो , एक सर्प तारांकित Pac-Man भूलभुलैया (१ 1980 .०) को सम्झना गराउने सेटिंग्समा।
एक प्रकार, निबल्स (१ 1991 1992 १) QBasic नमूना कार्यक्रमको रूपमा MS-DOS सँग पठाउन आयो। र १ XNUMX XNUMX २ मा संस्करण बोलाइयो रटलर दौड दोस्रो माइक्रोसफ्ट मनोरन्जन प्याक, खेलहरूको स collection्ग्रहको साथ समावेश गरिएको थियो, जसमध्ये केही विन्डोजको क्रमिक संस्करणहरूमा समाहित गरिएको थियो, जस्तै माईन्सवीपर वा फ्रीसेल।
यस पुनः सुरु संग, यो आश्चर्यजनक थिएन नोकिया नाकाबन्दी / सर्प / Nibbler मा शर्त को रूपमा पूर्वनिर्धारित खेल तिनीहरूको नोकिया फोनहरूको लागि। गतिशीलता सरल र लत थियो, रमाईलो थियो, र यसको प्राविधिक आवश्यकताहरू सीधा थियो।
सर्प खेल प्रकार ï¸ ï¸
साँप खेल एक क्लासिक हो समयको मोबाइल र कम्प्युटर खेल, त्यसैले हामी फेला पर्दा छक्क पर्नु पर्दैन यस खेलको बहु रूपहरू । यो संस्करणको संस्करणमा जारी राख्नुको कारण यसको व्यसन शक्ति र सरलता जब खेल्दै छ, र यो मार्केटमा समावेश गर्न जारी गर्न कुनै अधिक कारणहरू छैनन्।
यी सबैको साथ, that० को दशकमा सिर्जना गरिएको खेल बिर्सिएको होईन, र हामी साँप खेलको केहि फरकहरू पनि नाम लिन लाग्छौं।
नोकिया साँप 1
यो हो मूल साँप नोकिया S60 को लागी बनाइएको। यो संस्करण हो जुन हामीले हाम्रो मोबाइलमा सर्प गेम खेल्दै थियौं भनेर कुरा गरिएको थियो।
साँप मूल साँप । यो आईफोन फोनसँग उपयुक्त सर्प हो। यस संस्करणमा तिनीहरू यसलाई दिन चाहन्थे पुरानो लुक कि यो पहिलो मोबाइलहरुमा थियो।
टिल्टस्नेक । एक्सेलेरोमीटर प्रयोग गर्नुहोस्।
मोबाइल सर्प। आईफोन र आईपड टचको लागि क्लासिक साँप।
जियोस्नेक। यस संस्करणको नयाँ फंक्शन छ जुन हामी सामान्य रूपमा देख्छौं भन्दा फरक छ, र त्यो यो हो कि तपाईंसँग नयाँ फंक्शनहरू प्रयोग गरीरहेको छ विभिन्न भौगोलिक नक्शा।
मौलिक सर्प। पुरानो मोबाईलको ग्राफिक्स सकेसम्म विश्वासी राख्छ।
र सब भन्दा प्रसिद्ध कन्सोलहरू पनि, ग्राफिक्स र सुविधाहरूसँग जुन 90 ० को दशकसँग तुलना गर्न सकिदैन, प्रतिरोध गर्न सक्षम भएको छैन साँप खेल को संस्करण जारी । ती सबैले आफ्नो नयाँ संस्करणमा केहि नयाँ समावेश गरे, तर सर्प खेलको सार राख्दै। ती मध्ये PSP, प्ले स्टेशन,, WII, निन्टेन्डो DS र Xbox are 3० हुन्।
साँप धेरै राखिएको छ सरल दुबै नेत्रहीन र गेमप्लेको सर्तमा। फोकस एक सर्पमा छ जुन खेलाडीहरू भित्र पस्न सक्छन् चार दिशा निर्देशन: बाँया, दाँया, माथि र तल .
पिक्सेलहरू (स्याउ) अनियमित रूपमा देखा पर्दछ स्क्रिनमा र टाउको समात्नु पर्छ सर्पको। प्रत्येक पिक्सेल उपभोग संग, खेलाडीको स्कोर मात्र बढ्दैन, तर प unit्क्तिको कुल लम्बाई एक एकाई द्वारा।
यस प्रकार, स्क्रिनमा स्पेस सानो र सानो हुँदै गइरहेको छ, जसले फलस्वरूप निरन्तर कठिनाईको स्तर बढाउँदछ। खेल समाप्त हुन्छ जब सर्पले खेल मैदानको किनारा वा तपाईँको आफ्नै शरीरलाई छुन्छ।
धेरै आर्केड क्लासिक्स जस्तै, सर्प धेरै वर्ष को लागी एक इन्टरनेट फ़्लैश खेल को रूप मा असंख्य विविधता मा प्रस्तुत गरीएको छ। भेरियन्टमा निर्भर गर्दै, थप अवरोधहरू राखिन्छन् खेलाडीहरूको पथमा कठिनाईको स्तर बढाउन।
पोइन्टहरूको उच्च कुल संख्या सक्षम गर्न, बोनस पोइन्टहरू केहि संस्करणहरूमा थपिएको छ।
को बारेमा हास्यास्पद कुरा खेल के यो यसको अपरेशन हो सरल, र यस्तो लाग्दैन कि उनीहरूलाई क्र्याश हुनबाट बचाउन कुनै पनि चाल भन्नु आवश्यक छ। दिनको अन्त्यमा हामीसँग सम्पूर्ण स्क्रीन अनन्तसम्म स्पिन हुन्छ। तर उही कुरा सधैं हामीमा हुन्छ। हामी आफैंलाई पासोमा पार्दछौं सर्पको जीउ त्यहाँ बाहिर कुनै तरिका बिना।
ठिक छ, अनन्त जीवनका चालहरू वा हाम्रो सर्पको एउटा टुक्रालाई चमत्कारी ढ way्गले हराउने कसरी गर्ने भनेर आशा नगर्नुहोस्। यी केहि हुन् दिमागमा राख्नको लागि सरल उपायहरू यदि हामी सर्प हुर्कन चाहन्छौं र यस भित्र फस्न सक्दैनौं।
सुरुमा, यो सार्न धेरै सजिलो छ संग स्क्रीन वरिपरि अर्थहीन zigzags किनभने हामीसँग प्रशस्त ठाउँ छ, तर एक समय आउँदछ जब यो हाम्रो सर्पको आकारको कारणले असम्भव छ।
यहाँ हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाई सँधै सुरू गर्नुहोस् भित्रबाट सर्पलाई घुमाउनुहोस् , यस तरिका तपाईं टाउको शरीर बीच फस्नबाट जोगिनुहुनेछ।
यो हाम्रो साँपको मुख्य लक्ष्य हो, उनि बढ्नको लागि स्याउ खानु पर्छ। ठिक छ, यहाँ अर्को साधारण गल्ती छ, र त्यो हो तपाईं तिनीहरू समक्ष जानु हुँदैन पहिलो सल्लाह मनमा नराखी। सर्पको शरीरलाई सँधै नियन्त्रणमा राख्नुहोस्, यदि हैन भने, तपाई पुच्छरको भागसँग टक्राउने सम्भावना बढी हुन्छ।
यदि आवश्यक छ भने, स्याउ स्कर्ट जबसम्म तपाईं यो निश्चित हुनुहुन्न कि तपाईंसँग तपाईंको सम्पूर्ण सर्पमा नियन्त्रण छ।
के तपाईलाई यो खेल थाहा छ? हामी आशा गर्दछौं कि तपाईंसँग यस खेलको कहानी छ र यसलाई खेल्ने तरीका छ, तपाईं कसरी देख्नुहुनेछ रमाइलो यो हुन सक्छ।
तपाईंसँग यो खेल अहिले उपलब्ध छ र यो पनि हो नि: शुल्क, त्यसैले त्यहाँ सुरू गर्न कुनै बहाना छैन र स्क्रिनमा घण्टा घण्टा बिताउने।
लामो लाइभ मोबाइल खेलहरू!